I-China Wholesale Of Traditional Chinese Medicine Maca Ukukhiqiza kanye nefektri | Bestop
Igama lesiShayina: ma ka
Igama lesiNgisi: Maca
Igama lesiLatin: Lepidium meyenii Walp.
Umsebenzi oyinhloko: Ukondla nokuqinisa umzimba
IMarca (igama lesayensi: Lepidium meyenii walp.), (ISpanishi: Maca). Yisitshalo esiphambanweni esidabuka e-Andes yaseNingizimu Melika. Amaqabunga ama-Oval, i-rhizome emise njenge-radish, edliwayo, ukudla okumsulwa okungokwemvelo, okunothile ngezakhamzimba, okwaziwa nge- "South American ginseng". I-hypocotyl kaMaka ingaba ngegolide noma ophuzi okhanyayo, obomvu, onsomi, oluhlaza okwesibhakabhaka, omnyama noma oluhlaza. Impande ekhanyayo ephuzi yiyona ejwayelekile kakhulu, enesimo nokunambitheka okuhle kakhulu. UMaka ucebile ngezakhi eziphakeme zezakhi, ezingondla futhi ziqinise umzimba.
UMaka ungowokuzalwa endaweni enezintaba eziphakeme kakhulu, efanelekile ukukhula ezindaweni eziphakeme kakhulu, latitude ephansi, umehluko ophakeme wezinga lokushisa phakathi kwemini nobusuku, inhlabathi enesihlabathi esine-asidi kanye nomhlaba obalele; Isatshalaliswa e-Andes yaseNingizimu Melika, itshalwe enkabeni naseningizimu yePeru, eYunnan naseXinjiang yaseChina, futhi inendawo enkulu yomhlaba wokutshala ofanele.
Ukondla nokuqinisa umzimba.
Ama-alkaloid aseMaca ane-antibacterial, antiviral, anticoagulant, analgesic, anti-inflammatory, anti-tumor kanye nemiphumela yokulwa nenhliziyo nemithambo yegazi, ngakho-ke angasetshenziselwa ukwehla kokusebenza komzimba, i-menopausal syndrome, i-uterine fibroids, ibele i-hyperplasia, izifo ezingapheli zenhliziyo nemithambo yegazi, njll.
Itiye lingakhetha amathebulethi ama-Maca omile, amagremu ayi-10 ngosuku, lifake amaphilisi ama-3-5 ngasikhathi sinye, ngebhamu lamanzi abilayo, lingabhampa ngemuva kokuthi amaphilisi angalahli, lingahlafuna futhi ligwinye.
Cwilisa u-2-4G (izingcezu ezi-2-3) zezingcezu ze-Maca emanzini abilayo (300-500ml isikhathi ngasinye enkomishini ye-thermos) imizuzu engama-20. Ngemuva kokucwilisa izikhathi ezi-4, izingcezu zeMaca zingadliwa ngqo.
Kusukela ngasekupheleni kukaNovemba kuya ekuqaleni kukaDisemba, umbala weqabunga lezitshalo eziningi waphenduka waphuzi futhi wafiphala, izimpande ezinamanzi zazinwetshwa ngokuphelele, futhi isisekelo saso sasiyindilinga futhi sibuthuntu. Ngemuva kokuvuna okwenziwe, susa amaqabunga, susa inhlabathi nezimpande ezinemicu, uzihlanze ngamanzi, uzisike zibe izingcezu bese uzomisa elangeni.
IMaca ingadliwa elangeni, noma ingenziwa izitsha ezibandayo. Ukudla okuphekiwe kungcono. Ngaphambi nje kokuba uColumbus afike eMelika, umcebo wezwe wasePeru ubelokhu uyimifino ethandwayo. Inganikeza amandla amaningi okushisa. Abantu abake banambitha iMaca bathi ukuyidla kunomuzwa wokwaneliseka, kwenza abantu bazizwe bekhululeke kakhulu, futhi ukunambitheka kwayo kumnandi.
Izimpande ezintsha zeMaca zingathoswa ngenyama noma eminye imifino, noma zibiliswe ngamanzi noma ubisi ngemuva kokumiswa. Abomdabu basendaweni bavame ukuphuza izimpande ezintsha noju nojusi wezithelo njengesiphuzo. IMaca icebile ngezakhi eziphakeme zeyunithi futhi inomsebenzi wokondla nokuqinisa umzimba. Abantu abadle iMaca bazozizwa benomdlandla futhi benamandla futhi ngeke bazizwe bekhathele.
Langaphambilini Ikhasi Elisha Elivuniwe LaseKaffir Lime
Olandelayo: Imithi Yemvubelo Yendabuko Yemishanguzo YaseShayina
Isitolo esidayisa yonke impahla Of Chinese Herbal Medicine Ligustrum ...
Isitolo esidayisa yonke impahla Of Traditional Chinese Medicine Torto ...
Isitolo esidayisa yonke impahla omisiwe Polygonatum odoratum
Chinese Traditional zokwelapha Ligusti ...
Ithebhulethi Yesiko LamaShayina Lendabuko LaseDanshen
I-Raw Danger Tangerine Peel Isitolo esidayisa yonke impahla